Shiinaha GS Super 10 Micron Polyolefin Shrink Film iyo soosaarayaasha | GS PACK
Filimka 'GS Standard Polyolefin (POF) 5-Layer Co-Extruded Heat Shrinkable Film oo laga soo qaaday GS PACK, wuxuu leeyahay caddeyn sare iyo cufnaan hoose, Filimkan soo yaraanaya ee dhaqaaleed iyo mid dhaqaaleed ayaa leh hanti hawo hawo fiican leh marka loo eego 3-lakab oo filim iska cad, Inta lagu guda jiro baakadka, waa u janjeedha jiheynta ku yaraanaya hoos u dhaca xasiloonida iyo isu dheelitirka (in ka badan 60%); adkaysi sare, oo leh geeska jilicsan iyo shaabad hermetic ah, oo aan jajabinayn temperature heerkulka iska caabbinta, aan waxyeello lahayn oo aan urayn, caddayn-qoyan, waa bedelka ugu fiican ee PVC shrinkfilms-ka.
Filimka 'GS Standard Polyolefin (POF) 5-Layer Co-Extruded Heat Shrinkable Film oo laga soo qaaday GS PACK, wuxuu leeyahay caddeyn sare iyo cufnaan hoose, Filimkan soo yaraanaya ee dhaqaaleed iyo mid dhaqaaleed ayaa leh hanti hawo hawo fiican leh marka loo eego 3-lakab oo filim iska cad, Inta lagu guda jiro baakadka, waa u janjeedha jiheynta ku yaraanaya hoos u dhaca xasiloonida iyo isu dheelitirka (in ka badan 60%); adkaysi sare, oo leh geeska jilicsan iyo shaabad hermetic ah, oo aan jajabinayn temperature heerkulka iska caabbinta, aan waxyeello lahayn oo aan urayn, caddayn-qoyan, waa bedelka ugu fiican ee PVC shrinkfilms-ka. Waxay sifiican uga ilaalin kartaa badeecadaada adoo ka hortagaya muuqaalka alaabta ka soo baxda boodhka iyo urta gaarka ah.
Tani waa sheyga ugu Fiican Dhaqaalaha ee soosaara Filim kaas oo la jaan qaadi kara mashiinada wax lagu duugo ee otomaatiga ah iyo kuwa otomaatigaba ah sheygan sidoo kale waxaa cadeeyay heerka tayada Mareykanka (FDA) wuxuuna gudbiyay soo jeedinta heerarka imtixaanka laxiriira.
Astaamaha filimka polyester-ka yareyn kara kuleylka ee PET: wuu deggan yahay heerkulka qolka, wuu yaraanayaa marka la kululeeyo (ka sarreeya heerkulka kala-wareegga dhalada), kuleylkuna wuxuu ka yaraadaa in ka badan 70% hal jiho.
Faa'iidooyinka kuleylka kuleylka baakadka filimka polyester-ku waa:
• Maqaarku waa mid hufan oo ka tarjumaya sawirka sheyga.
• Si adag u adkee baakadka, ka hortagga kala-firdhinta wanaagsan.
• Ka hortag roobka, qoyaanka, iyo caaryada.
• Soo kabasho la'aan, oo leh hawl kahortag been abuur ah. Filimka polyester-ka-yareyn kara ayaa badanaa loo isticmaalaa cuntada ku habboon, suuqa cabitaanka, qalabka elektarooniga ah, iyo alaabada birta. Gaar ahaan, hoos u dhigista sumadaha ayaa ah meelaha ugu badan ee laga codsado. Sababtoo ah horumarka degdega ah ee dhalooyinka cabitaanka PET, dhalooyinka cabitaanada sida koola, sprite, iyo casiirka kaladuwan waxay ubaahanyihiin filimka yareyn kara kuleylka PET in laguwaafajiyo astaamaha kuleylka kuleylka. Waxay ka tirsan yihiin qaybta polyester-ka waana agab bey'adeed u fiican oo si fudud dib loogu warshadeyn karo. isticmaal.
Ka sokow in loo adeegsado sumcado yareynaya, filimada cajaladda-yareyn kara kuleylka ayaa hadda sidoo kale loo isticmaalaa baakadaha dibedda ee badeecooyinka maalinlaha ah. Sababtoo ah kama difaaci karto oo keliya alaabooyinka baakadeysan naxdinta, roobka, qoyaanka, iyo miridhku, laakiin sidoo kale waxay ka dhigi kartaa inay ku guuleystaan ​​wax soo saarku alaabtiisa oo si qurux badan loo daabacay, waxayna si fiican u tusi kartaa sawirka wanaagsan ee soo saaraha. Maalmahan, soo-saareyaasha baakadaha ee sii kordhaya waxay isticmaalaan filim duuban oo daabacan si ay u beddelaan filimka hufan ee hufan. Sababtoo ah filimka soo yaraaday ee daabacan ayaa hagaajin kara muuqaalka sheyga, wuxuu ku habboon yahay xayeysiinta badeecada, iyo sumadda sumadda ayaa saameyn qoto dheer ku yeelan karta quluubta macaamiisha.
Dhumucdiisuna Micron ASTM-D 374 10um
Cufnaanta g / cm3 ASTM-D 1505 0.92
Yaraynta Bilaashka ah % ASTM-D 2732 MD 62
Dheeraynta % ASTM-D 882 MD 110
Awoodda siligga N / mm2 ASTM-D 882 MD 115
Iska caabin ilmada N ASTM-D 1938 MD 3.5
Xoog Khatimidii N / 15mm Q BT 23-58 10
Ballaca Gudaha Inji 3
Hore: GS Hot Slip Polyolefin Shrink Film
Xiga: Soosaarka Warshadda Transparent Polyolefin POF Heat Shrink Duub Filim
Polyolefin Shrink Gauge
Duubista Polyolefin Pof, Polyolefin Pof Shrink Film, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Iskudhin Duubista Filimada, Yaree Filimka PCv, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista,